Minisitra Paul Rabary : “Mangataka mba hiarovana ny fianaran’ny zaza Malagasy” -
AccueilRaharaham-pirenenaMinisitra Paul Rabary : “Mangataka mba hiarovana ny fianaran’ny zaza Malagasy”
08/05/2018 admintriatra Raharaham-pirenena 0
« Amin’izao zava-misy eto amin’ny firenena izao dia miangavy antsika rehetra, n’inona n’inona tsy fitovian-kevitra, mba hiaro ny fianaran’ny zanatsika sy zandrintsika. Isika rehetra dia miara-manaiky fa any am-pianarana no tokony hisy ny mpianatra. Efa tokony hanomana ny fanadinana atrehin’izy ireo amin’ity taona ity koa ireo zanatsika sy zandrintsika ireo, koa mangataka antsika rehetra mba hanampy azy hianatra anaty filaminana tsy ho voakotaba sy ho voaelingelina”, io no fanehoan-kevitry ny minisitry ny Fanabeazam-pirenena, Rabary Andrianiaina Paul manoloana ny zava-misy amin’izao fotoana izao. Raha ny hita tokoa, dia lasibatra sy lasa sorona amin’ny tranga-javatra miseho amin’izao fotoana izao ny zaza malagasy. Na eto an-drenivohitra izany, na any amin’ny faritra, amin’ny famoahana ireo mpianatra ao an-dakilasy mba hanampy ireo solombavambahoaka lazaina fa ho an’ny fanovana amin’ny fitokonana ataony. Ireto solombavambahoaka ireto izay milaza moa fa tsy namoaka ireo mpianatra fa sitrapon’ireo mpianatra no mitokona ho fanohanana ireo mpampianatra ao aminy, araka ny filazan’ny solombavambahoaka, Razanamahasoa Christine. Tokony hijoro amin’ny maha ray aman-dreny azy ity minisitry ny Fitsarana tamin’ny Tetezamita ity, ka izy mihitsy no manao antso avo tahaka izao ataon’ny minisitra Paul Rabary izao mba ho fitsinjovana ny ho avin’ireto mpianatra ireto.
Ireto mpianatra ireto izay ho avin’ny firenena, nefa entina eny amin’ny lalambe atao fitaovana hakana fahefana. Ohatra ratsy ho an’ny tanora izao ataon’ny solombavambahoaka ho an’ny fanovana izao satria ny hampirisika ireo mpianatra hianatra no tokony ataon’izy ireo fa tsy hampirisika azy hidina andalambe akory, indrindra ato anatin’izao telo volana fahatelo izao. Ity telo volana farany ity izay saropady indrindra, satria fotoana hamitana ny fandaharam-pianarana sy fotoana hanaovana ny famerenana ary ihany koa hanombanana ny fahaizan’ny mpianatra amin’izao ankatoky ny fanadinana izao. Tsy fanadinam-panjakana ihany fa koa fanadinana hifindrana kilasy. Marihina hatrany fa ny firenena no mandroso dia noho ny taranaka vanona. Efa maro ny zava-niseho sy nianjady tamin’ny mpianatra nandritra ity taom-pianarana 2017-2018 ity, raha tsy hilaza afa-tsy ny valanaretina pesta sy ny rivo-doza nifanesy, koa mbola ampiana fitokonana ihany ve? Ekena fa manan-jo mitaky sy hitolona ireo solombavambahoaka fa tsy hanapotika kosa, indrindra ny ho avin’ny tanora. Noho izany, avelao ny zanatsika hianatra fa tsy misy vokatra ho azo amin’ny fitokonana lavareny. Aza simbaina ihany koa ny ho avin’ny taranantsika satria ho potika ny ho avin’ireto mpianatra ireto, raha atao fitaovana politika lava izao entina handrobana fahefana. Araka izany, ka na amin’ny endrika inona na amin’ny endrika inona no hisehoan’ny tolona atao amin’izao fotoana izao entina hanonganam-panjakana, dia aoka tsy ho sorona amin’ny tolona atao ny mpianatra, fa ny zaza aleo hianatra!
Tonga eny anivon’ny Fitsarana mihitsy ny raharaha noho ny fibodoan’ny minisitry ny Fambolena teo aloha nandritra ny fitondrana HAT, Ihanta Randriamandranto, ny fiara Toyota Land Cruiser laharana 8479 TAE. Ny faha-21 Novambra 2011 no notendren’ny ...Tohiny